नजिकबाट हेर्दा कवाड सामान, टाढाबाट हेर्दा गाइने किरो !
बिहीबार, १२ जेठ, २०७९- १४:०३:००/ Thursday 05-26-22
काठमाडौँ, १२ जेठ । नेपाली भाषामा गाइने किरा र नेवारीमा ‘झ्यालिन्चा’ भनेर चिनिने प्रकृति र मानिसको साथीलाई अहिले बबरमहलस्थित नेपाल कला परिषद्मा देख्न सकिन्छ । परिषद्को भित्तामा एउटा कुनामा सजिएको छ ‘झ्यालिन्चा’ ।
उक्त किराको महत्व झल्काउन र संरक्षणमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कलाकार शारदामान श्रेष्ठले ‘सिर्जना २०२२: सामूहिक कला प्रदर्शनी’लाई नै केन्द्रित गरेर झ्लालिन्चा बनाउनुभएको हो । त्यसमाथि कवाड सामान प्रयोग गरेर लोपोन्मुख किराको आकृति उतार्न कति गाह्रो भयो होला ? यसको अनुमान पनि सहजै लाउन गाह्रो छ ।
एउटा मित्रु जीवको संरक्षण गर्नुपर्ने त छँदैछ । फ्याँकिएका र कवाड सामान जोडेर झ्यालिन्चाको रुप दिनु अर्काे महत्वपूर्ण विषय हो । उहाँले झ्लालिन्चामार्फत कवाड सामान पनि उपयोगी हुनसक्छ, त्यसलाई कला भरेर आकर्षक र बिक्री योग्य बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिनुभएको छ ।
उहाँले रेडबुलको ‘कभर’ जोडेर गाइने किराको पुच्छरसहितको पछिल्लो भाग तयार पार्नुभएको छ । मोटरसाइकलको ट्याङ्कीलाई शरीर, हेल्मेटलाई टाउको त इन्जिनलाई आँखाको आकार दिनुभएको छ । तार बुनेर जालीदार पखेटा बनाउनुभएको छ । नजिक गएर हेर्दा ति सामग्री जोडेको देखिए पनि अल्ली टाढाबाट उड्दै आएर भित्तामा बरिसहेको गाइने किरो कै भाव उत्पन्न गराइदिन्छ ।
अर्काे कुनामा कलाकार सुनिल रञ्जितले नेपाली संस्कृतिलाई मुख्य विषय बनाएर पाँच चित्र राख्नुभएको छ । रञ्जितले ‘फिगरेटिभ’ आर्टमार्फत कृषि प्रधान देश नेपालमा अब रोपाइँ सुरु हुन लाग्यो है भनेर शुभसङ्केत गर्नुभएको पाइन्छ । रोपाईँ संस्कृतिलाई उक्त आर्टले उजिल्याइदिएको छ ।
झिसमिसेमा बाजा बजाउँदै देउताको थानमा जाने नेवारी संस्कृति बचाइराख्न ‘व्याँचुली’मार्फत झकझक्याउनुभएको छ । सँगसँगै उहाँले अमूर्तकलालाई पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “नेपालका वरिष्ठ कलाकार कलेजमा छन्, वर्षको एक पटक प्रदर्शनी गरेर विद्यार्थीलाई हौसला प्रदान गर्न र समाजलाई चित्रमार्फत कला, संस्कृति, सम्पदाबारे जानकारी दिई संरक्षणमा योगदान दिन तथा सिर्जना कलेजको उपस्थिति जनाउन प्रदर्शनी गरिएको हो ।”
कलेजका सहप्राचार्य नविन्द्रमान राजभण्डारीले बैद्धिक पररम्परालाई अमूर्त कलामार्फत देखाउनुभएको छ । उहाँका सिर्जनाले अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ जाने गोरेटाहरु पहिल्याइदिने प्रयास रङको संयोजनमार्फत गरेकोे छ । “अमूर्त कला बुझिँदैन भन्ने पनि छन्, तर यो सारतत्व हो, सरलीकृत हुन्छ, सिर्जनाहरु अन्तक्र्रियामा सहभागि हुन्छ”, राजभण्डारीले भन्नुभयो ।
कलाकार पूर्णरत्न बज्राचार्य कारणवस नभ्याएकाले बुधबार प्रदर्शनीस्थल मै चामलको पिठोले रेखीमार्फत बुद्धमण्डलको आकार दिँदै हुनुहुन्थ्यो । “यो वास्तविक परम्परागत नेवारी आर्ट हो जुन रङ जहाँ चाहिन्छ त्यही राख्नुपर्छ, अन्यथा हुने वित्तिकै मण्डल बिग्रिन्छ”, रङ मिसाइएको चामलको पिठोबाट आकार बुद्धको बनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले यसमा सचेत भएर गर्न सक्नुपर्छ ।”
अर्का कलाकार शरद रञ्जितले नृत्यलाई मुख्य विषय बनाएर रङको सुन्दर संयोजन गरी फरक दृष्यलाई चित्रहरु प्रस्तुत गर्नुभएको छ । प्रदर्शनीमा उहाँका चार सिर्जना छन् । कलाकार रञ्जितले नृत्यका आकार विर्साएर त्यसभित्रका रङलाई मात्रै टपक्क टिप्नुभएको छ । उहाँले कलालाई समाजसँग साक्षात्कार गराउनुभएको छ । नृत्यलाई खुसीको पर्याय मानिन्छ । कलाकार रञ्जित त्यसबाट प्रभावित हुनुभयो र केही भावनाहरु रङमार्फत क्यान्भासमा उतार्नुभयो । “केही अमूर्त तर केही आकृति आउने खालका अर्धअमूर्त छन्”, उहाँले भन्नुहुन्छ, “नृत्यका भावलाई रङहरु बीच नै अन्तक्र्रिया गराएर रङ्गिन समाज चित्रण गर्ने प्रयास गरेको हुँ ।”
कलेजमा आबद्ध अग्रज कलाकारको सिर्जना प्रदर्शनी गर्दा विद्यार्थी लगायत अन्य कलाकारलाई समेत प्रेरणा मिल्ने र समाजमा कलेजको पनि उपस्थिति देखिने भएकाले प्रदर्शनी आयोजना गर्दै आइएको संस्थापक सदस्य तथा प्राध्यापक सुनिल रञ्जितले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार गत वर्ष कोरोनाका कारण प्रदर्शनी आयोजना गर्न नसकिए पनि यसपटक चौथो संस्करणको रुपमा आयोजना गरिएको हो । कलेजले सन् २०१८ देखि प्रदर्शनी गर्दै आएको छ । प्रदर्शनीअन्तर्गत आज विद्यार्थीले प्रत्यक्षरुपमा मुहार चित्र सिर्जना गर्ने कार्यक्रम छ । रासस ।
जस्टिन बीबरलाई भएको अनुहारको पक्षघात कस्तो रोग हो ?
जम्बुलिङ ईन्टरनेशनल अवार्ड २०२२ को नोमिनेशन सकियो